Fanendrena Manatantara Ao Amin’ny Fitsarana Tampony Ao Pôrtô Rikô · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2014 1:22 GMT
Maite Oronoz Rodríguez. Pikantsary tamina lahatsary.
*Mankany amin'ny lahatsoratra amin'ny teny Espaniola avokoa ny rohy rehetra, raha tsy misy fanamarihana hafa
Nifantina an'i Maite Oronoz Rodríguez mba hisahana ny toerana iray ao amin'ny Fitsarana Tampony ao Pôrtô Rikô ny governoran'i Pôrtô Rikô, Alejandro García Padilla, mahatonga azy ho mpitsara voalohany naneho ampahibemaso ny mahalesbiana azy hitana ny toerana matanjaka indrindra ara-pitsarana ao amin'ny firenena. Raha voamarina tokoa, dia i Oronoz Rodríguez ihany no mpikambana avy ao amin'ny fiarahamonina LGBT manana toerana ambony indrindra eo anivon'ny sampana fitsarana ao anatin'ny governemantan'i Pôrtô Rikô ary vehivavy fahadimy hiandraikitra ny ao amin'ny Fitsarana Tampony.
Nibaribary ny fironana ara-pananahan'i Oronoz Rodríguez raha nisaotra ampahibemaso ny miaraka aminy Gina Méndez izy tamin'ny fanohanany. Voarain'i Noticias 24/7 tao anatin'ity lahatsary manaraka ity izany fotoana izany, izay mandrakotra ny valan-dresaka hoan'ny mpanoratra gazety tamin'ny fanambarana ny fanendrena azy:
Marobe ireo olona nidera ny fahatsoran'i Oronoz Rodríguez tao amin'ny Twitter, anisan'izany ilay mpanoratra gazety Benjamín Torres Gotay:
Tamin'ny fiarahabana ampahibemaso ny miaraka aminy, dia naneho fihetsika feno herim-po hafa kely i Maite Oronoz.
Ao anatin'ity fanendrena nilatsaka taorian'ireo fepetra nankatoavina tamin'ny taon-dasa izay manitatra ny fiarovana araka ny lalàna bebe kokoa hoan'ireo mpifankatia mitovy taovam-piananahana, miezaka manalavitra amin'ny fankahalàna natao tamin'ny fiarahamonina LGBT avy amin'ny governemanta teo aloha notantanin'i Luis Fortuño avy amin'ny Partido Nuevo Progresista (PNP) [Antoko Progresista Vaovao] ny fitondran'ny governora García Padilla. Avy amin'ireo mpanao politika PNP ny sasany tamin'ireo kabarim-pankahalàna mahery vaiky indrindra natao tamin'ny fiarahamonina LGB, ny tena malaza dia ny lahateny nataon'ny lehiben'ny antenimieran-doholona Thomas Rivera Schatz.
Mba hanekena azy ho lasa mpitsara, mbola tsy maintsy handalo fanadihadiana ao amin'ny Antenimieran-doholona i Oronoz Rodríguez, antenimiera izay fehezin'ny governora García Padilla avy ao amin'ny Antoko Partido Popular Democrático. Nandrisika ny Antenimieran-doholona mba hankatò azy ilay mpikatroka mpiaro ny zon'ny LGBT, Pedro Julio Serrano ary niarahaba azy sy ny namany tamin'ny alalan'ny Twitter:
Miarahaba an'i Maite Oronoz sy Gina Méndez amin'ny fiainana ny fitiavan'izy ireo ankarihary. Noho ny fitiavana be tokoa ity firenena ity sy ny [fitiavana ny] tsirairay ankahalalahana. Tena mirehareha tokoa izahay!
Manome hery ny fanapaha-kevitr'i Oronoz Rodríguez nanambara ny fironany ara-pananahana, tsy tahaka ireo olo-malaza tsy sahy manao izany noho ny tahotry ny fitsipahana ny fanendrena azy. Raha hamafisina ny fanendrena azy, dia hahaliana ny mahita izay fanapaha-kevitra manaraka ho avoakan'ny Fitsarana Tampony, satria nanendry mpitsara mpandala ny nentin-drazana enina ny fitondrana teo aloha, izay efa nanohitra ampahibemaso ny fitovizan-jo eo amin'ny mariazy sy ny fananganan-jaza hoan'ireo mpifankatia mitovy taovam-pananahana ny sasany tamin'izany .
Na dia izany aza, tsara ny misarika ny saina mikasika ilay lahatsoratr'i Érika Fontanez Torres tao amin'ny gazetiboky nomerika 80 grados tamin'ny volana Aprily lasa teo:
Isaky ny misy toerana banga ao amin'ny Fitsarana Tampony ao Pôrtô Rikô, dia misy ireo “anarana” voatonotonona. Matetika ireo anarana ireo dia maneho fisahanana andraikitra misy ifandraisany amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana, lova ho an'ny fomba amam-panao ara-dalàna hoan'ny fianakaviana sasany, hita tamin'ny lisitry ny toerana ampiraisin'ny besinimaro amin'izay lazaina fa fahombiazana arak'asa. Tsy misy olona tsy mitongilana. Matetika “tsy misy tasy” ny lalana nodiavina. Saingy misy vidiny izany satria midika izany matetika fa, na dia “nahomby” aza ny fomba fanao ara-dalàna amin'ny fanarahana ny fepetran'ny asa, dia ilàna fitandremana raha misy olona mitady ho zatra na te-hampaharitra ny tsy rariny ataon'ny tsy misy zavatra miova (statu quo) .
Nalaina tao amin'ity lahatsary ity ireo sarin'i Maite Oronoz